Arshavin जूलिया लन्डन "शस्त्रागार" को एक लोकप्रिय फुटबल खेलाडी को पत्नी रूपमा सबै थाह छ। यो एक साँचो Homemaker र एक अद्भुत आमा स्क्रिनमा देखियो। त्यो सधैं पति को टाउको परिवारमा हुनुपर्छ भन्ने विश्वास छ। तर, 2012 मा, विवाह अप भङ्ग। के जूलिया भयो? गरेको यो सबै कसरी सुरु भयो पत्ता गरौं।
Andrey Arshavin Arshavin र जुलिया 2003 को तातो गर्मी भेटे। त्यो दिन मा, केटी छैन भाग्यशाली थियो। त्यो उनको मित्र गए जब, उनको कार grazed। तर, सबै कुरा कुनै पनि गम्भीर परिणाम बिना भयो। मित्र अन्तिम मा पुग्दै, त्यो कहाँ अन्ततः जलाए समुद्र तट, उनको साथ भयो। माहौल हल्का गर्न, बालिका रेस्टुरा जाने निर्णय गरे। र कुनै आश्चर्य! रेस्टुरेन्ट अगाडि, तिनीहरूले Nevsky साथ टहलने लिन निर्णय गरे। Andrei Arshavin - तीन केटाहरू, तिनीहरूलाई बीचमा थियो, उहाँले तिनीहरूलाई भेट्न बाहिर गए। उनि भन्छन्, यो थियो पहिलो नजर मा प्रेम। एक महिना पछि, तिनीहरूले भेट पछि जवान सँगै बस्न थाले। त्यतिबेला एन्ड्रयू बीस-दुई वर्ष थियो, र भर्खरै अठार जूलिया।
तिनीहरूले भेट्दा Arshavin फुटबल क्यारियर बस सुरु भएको थियो। उहाँले अझै पनि पीठ, "जेनिथ" मा बसिरहेका थिए। त्यसैले जो त्यो थियो र त्यो fateful बैठक युलिया अघि के थियो?
युलिया Arshavin: जीवनी
केटी जीवन मा उहाँले Andrei भेटे अघि एक सानो कुरा थाहा छ। त्यो जुन 1985 मा तेस्रो, को गर्मी मा जन्म भएको थियो। म सेन्ट पीटर्सबर्ग मा भयो। जूलिया सामान्य विद्यालयमा अध्ययन, म थियो कक्षा मनिटर र लगनशील विद्यार्थी। त्यो सम्मान संग स्कूल स्नातक। त्यसपछि, यो लेखको हेरोइन विश्वविद्यालय एयरोस्पेस इन्सट्रूमेंटेशन को एक विद्यार्थी भए, को विशेषता "व्यवस्थापन" प्रविष्ट गर्नुभयो। तर, एक उपाधि प्राप्त गर्न र उच्च स्कूलमा मेरो अध्ययन रूपमा, त्यो गर्भावस्था कारण बाँकी सकेन। युलिया अनुसार, त्यो छैन धेरै र यो विशेषता अध्ययन गर्न मन पराएका छ। यो नै एक रचनात्मक व्यक्ति मानिन्छ किनभने त्यो, पत्रकारिता को संकाय प्रविष्ट गर्न चाहन्थे। तर नातेदार dissuaded। जूलिया दस वर्षको हुँदा आफ्नो आमाबाबु छोडपत्र। त्यो उहाँलाई धेरै नजिक थियो धेरै गाह्रो उनको बुबा संग एक ब्रेक मार्फत, जा रहेको छ। आमा remarried। Xenia र अलेक्जेन्डर - जूलिया मा त्यहाँ दुई जवान बहिनीहरूलाई छ। यस बालिका सँगै साथ प्राप्त। अर्को तथ्य आमा को प्रथम नाम भनेर युलिया ज्ञात छ - Baranowska। तर, मिडिया सधैं उनको मात्र होइन युलिया Arshavin भनिन्छ। हाम्रो हेरोइन आफ्नो जीवन बारे कुरा गर्न मन छैन रूपमा अवधिको जीवनी, यहाँ समाप्त हुन्छ। सिद्धान्त मा, छैन पनि महत्त्वपूर्ण छन् जो मान्छे को लागि अनुभूति पर्याप्त र जानकारी छ।
तीन छोराछोरीको आमा
Arshavin जूलिया - सुखी आमा। Artyom नामको छोरा - डिसेम्बर 2005 को सातौं दिन, त्यो एक पहिलो बच्चा जन्म दिए। र अप्रिल 2008 मा तेस्रो मेरी छोरी जन्मिएका थिए। Alina उनको भनिन्छ, तर चाँडै तिनीहरूको मन परिवर्तन र नाम दिए - यूहन्ना। जन्म डाक्टर एक सीजेरियन खण्ड गर्न थियो, गाह्रो थियो। तथापि, अन्त सबै मा बच्चा र आफ्नो आमा संग राम्रो थियो। अगस्ट 2012 मा चौधौँ तेस्रो बच्चा, Arseny नामको केटा थियो। त्यो हो जूलिया तीन छोराछोरीको सुखी आमा भयो। अब त्यो एक दुई कोठा अपार्टमेन्ट मा, लन्डन को उत्तर मा उनको बच्चाहरु संग बसोबास।
आफ्नो क्यारियर के? छोराछोरीको जन्म अघि, त्यो रेडियो "गीत" मा छोटकरीमा काम गरे। यो नाम "जेनिथ" अन्तर्गत आफ्नो प्रसारण सुरु गर्न योजना, तर लन्डन जाने थियो छ। जूलिया परिवार पहिलो स्थानमा सधैं थियो। त्यसैले, एक काम प्राप्त गर्न कुनै पनि प्रयासहरू असफल भयो, तर सिद्धान्त मा, तिनीहरू द्वारा छन्, र यो थिएन। रूपमा त्यो Arshavina Yuliya भने, क्यारियर साँच्चै असम्भव छ जो एक निर्माण गर्नुपर्छ। र त त्यो जानाजानी परिवारको पक्षमा यसको विकल्प र एक गृहिणी, एक उदाहरणीय पत्नी, Homemaker र मायालु आमा भयो।
युलिया Arshavin: फोटो, शैली बारेमा एक सानो, को शूटिंग बारेमा
जूलिया घर र बाँकी सहज लुगा रुचि। मूलतः, टी-शर्ट, जीन्स, tracksuits, जूता, Sweatshirts र प्रकाश कपडे। तल जूलिया उनको पूर्व पति संग एक्लै वा सँगै घटना उपस्थित जसमा तस्बिरहरू मा केही तस्बिर, छन्।
उनको फोटो चमकदार पत्रिका को कवर सजाउनु। एक दिन उनले आफ्नो जीवनको बारेमा एक स्पष्ट साक्षात्कार दिए जहाँ नमस्कार पत्रिका, मा बच्चाहरु संग देखियो।
2014 मा, एक लामो मौन पछि, त्यो Arshavin संग निर्माण गर्न प्रयास गरिएको छ जो शुरुवात र, हाय, आनन्द अन्त बारेमा विस्तृत बताउन निर्णय गरे। जुलिया एक साक्षात्कार Andreyu Malahovu दिनुभयो। लगभग scandalous शो मा देखाइएको केटी को एक स्वीकार पहिलो च्यानल मा "तिनीहरूबाट कुरा गरौं।"
ब्रेक पछि जीवन
सम्बन्ध बारे दस वर्षसम्म एन्ड्रयू देखि लामो थियो। Alas, यो एक औपचारिक विवाह, तर केवल एक नागरिक थियो। 2013 मा, परी कथा समाप्त भयो। जूलिया खाली दुःखित। तर, त्यो बचाउनुभयो गर्न, तर केवल समर्थित चाहँदैनथे। आफ्नै मित्र Arshavin को फुटबल निन्दा र नारी एक्लै हालियो। त्यो पार्टी बोलाएर काम प्राप्त छ। अब जूलिया नेतृत्व रूपमा टेलिभिजनमा देखिन्छ।
मिति, Arshavin जूलिया सक्रिय। त्यो दौरा र गतिविधिहरु को एक किसिम आयोजित र कार्यक्रम समावेश छ। तर, कुनै पनि मामला मा, छोराछोरीलाई बारेमा भूल र खुशी तिनीहरूलाई संलग्न छैन।
मार्च 2014 मा, त्यो लण्डन (मा Maslenitsa को उच्च स्तरको उत्सव आयोजित ट्राफलगर स्क्वायर)। सह-पाहुना एक अभिनेता र showman Vyacheslav Manucharov थियो। जुलिया पनि "रूस" च्यानल मा "गर्ल्स" नेतृत्व रूपमा टेलिभिजन यसको debut बनाउँछ। क्षणमा यो पोस्ट-शो को जो टीएनटी मा जान्छ "द स्नातक," विशेषज्ञहरु मध्ये एक छ। को esters द्वारा न्याय, यो टेलिभिजन र शो व्यापार गर्न काम र accustomed राम्रोसँग copes। जूलिया छोराछोरीको वस्त्र को एक संग्रह जारी गर्न भविष्यमा योजना छ।
कसले छुटानाम भएपछि पतिले पत्नीलाई दिने पैसा सन्दर्भमा Arshavin suing छ।
Yuliya Baranovskaya - पत्नी Arshavin, तर हाय, पूर्व - एक मजबूत मातृ अन्त संग बलियो महिला छ। उनको जीवनी बारे, साना ज्ञात छ, र जो कसरी गोप्य जीवन राख्न सिक्न चाहन्छ, त तपाईं केटी सम्पर्क गर्न आवश्यक छ।
सिरियल "अनि हिउँ फल्स": अभिनेता, भूमिकाको, षड्यन्त्र, सारांश
Gennady Bachinskii: जीवनी, पेसा र मृत्यु को कारण
"पङ्क्ति"। अभिनेता, भूमिकाको, षड्यन्त्र,
यो श्रृंखला "राज्य" - ठूलो रानी को कथा।
अभिनेता "अन्धो भाग्य": भूमिकाको र जीवनीहरू
चिकित्सा ड्रेसिङ। ड्रेसिङ को प्रकार (फोटो)
खरबुजा "Maynkraft" कसरी बढ्न: प्रक्रिया को विवरण
शियान (चीन): ठाँउहरु र शहर को इतिहास
अनलाइन चलचित्र उच्च गुणवत्ता मा!
तपाईँको फोन लागि अडान कसरी बनाउने? स्क्रैप सामाग्री बाट सजिला ग्याजेट
को बाल्टिक देशहरूमा - क्षेत्र को विशेषताहरु
"Irunine": समीक्षा र चेतावनी
कसरी multvarke मा क्रीम सस मा चिकन हृदय खाना पकाउनु